R & D Team - Southern mgbukepụ wearable Technology Co., Ltd.
kpụ ọkụ n'ọnụ Clothing
kpụ ọkụ n'ọnụ Jacket
kpụ ọkụ n'ọnụ Hoodie
kpụ ọkụ n'ọnụ Vest
Kpụ ọkụ n'ọnụ Base Layer
kpụ ọkụ n'ọnụ Ogologo ọkpa
Air-oyi uwe elu
Air -conditioned Ezu
Kpụ ọkụ n'ọnụ Olu Nche
Kpụ ọkụ n'ọnụ Agwọ Ezu
Kpụ ọkụ n'ọnụ Eye Nkpuchi
Kpụ ọkụ n'ọnụ ikpere Kechie
kpụ ọkụ n'ọnụ echebe Mmadụ
kpụ ọkụ n'ọnụ uwe
kpụ ọkụ n'ọnụ Socks
kpụ ọkụ n'ọnụ insoles
kpụ ọkụ n'ọnụ Shoes
Kpụ ọkụ n'ọnụ Seat fom
The R & D center na-emi esịnede Fashion imewe, n'ibu, electronic, software, na nnwale na oru ngo management.
1. The ejiji imewe otu na-pụrụ iche na uwe style imewe na sample Ndinam dị ka ndị ahịa 'arịrịọ ma ọ bụ onwe development.
2.The n'ibu otu na-pụrụ iche na 3D e kere eke na ebu imewe.
3. The electronic otu na-pụrụ iche na-dijitalụ circuit, LF wuru circuit, HF (RF) circuit na ike electronic circuit imewe.
4. The software otu na-pụrụ iche na ndị MCU / DSP agbakwunyere femụwe, PC ngwa, atụbipụ ngwa na IOS / Android ngwa imewe.
5. The ule otu na-pụrụ iche na zuru ezu ule iji hụ ihe zuru okè.
6. The PM otu na-pụrụ iche na ndị manpower, ngwaọrụ, efu / eri na oge management iji hụ na niile oru ngo nwere ike ga-agwụ agwụ adọ na rụọ ọrụ nke ọma.
Ọrụ na Ngwá Egwú:
The R & D center nwere 520 square mita ụlọ ọrụ na ụlọ nyocha. The na-arụ ọrụ bụ ebe dị mma na-onwem na n'okpuru ihe:
Anyị na-elekwasị anya na ndị nwere ọgụgụ isi ihe onwunwe ìgwè. Rue 2nd oge nke 2018, anyị nwetara 18 mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ, 28 mmekọ nlereanya nchọpụta Kemịkalụ na 4 anya nchọpụta Kemịkalụ, emezu 2 sayensị oru ngo nyocha na sayensị & technology nkewa nke Dongguan na obere / ajụ enterprise nkewa nke Dongguan. Na n'akụkụ nke ọzọ, anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ ọhụrụ mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ na mmekọ nlereanya nchọpụta Kemịkalụ rue mgbe.
N'ihi ngwaahịa R & D ọrụ bụ a mgbagwoju ọrụ, na mmadụ aku R & D ga-pụrụ iche na ụfọdụ n'ógbè, anyị R & D management-eji matriks pesonel oke, ezipụta ọ bụla oru ngo na-arụ ọrụ na kwụ ndokwa na-ezipụta na vetikal talent na ụfọdụ isiokwu na vetikal ndokwa . Na kwụ njikwa, anyị kenyere onye maara na ngwaahịa Ọdịdị na arụmọrụ, nakwa dị ka mma na ego oke na nchikota. Ha na-ukwuu n'ime nwetara technology ọkachamara ma ọ bụ agadi management ọkachamara. Na-akwụ ọtọ njikwa, anyị na-eji onye maara na ngwaahịa ihe ọmụma, rigorous sayensị na engineering ikike iche echiche na mmepụta usoro. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị magburu onwe engineer.
© Copyright - 2010-2020 : All Rights Reserved. Products Guide - Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
kpụ ọkụ n'ọnụ Ogologo ọkpa, kpụ ọkụ n'ọnụ Vest, kpụ ọkụ n'ọnụ Jacket, Njọ insoles rechargeable , 12V Njọ Car Seat fom, Heating Kedo akwa ,